'ကြီးကြပ်မှုကကျွန်တော့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေပြီးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေတယ်' - TAB သည်အားကစားသမားကြယ်ပွင့်နှင့်ပိုမိုလတ်ဆတ်သော AMY HUNT - ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်နှင့်စကားပြောသည် - သတင်း
'ကြီးကြပ်မှုကကျွန်တော့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေပြီးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေတယ်' - Tab သည်အားကစားသမားကြယ်ပွင့်နှင့်လတ်ဆတ်သောအေမီဟန့်တ်တို့အားပြောဆိုသည်
Cambridge သည်အဆင့်မြင့်အောင်မြင်သောကျောင်းသားဟောင်းများအားအခြားမျက်နှာတစ်ခုထပ်မံထည့်သွင်းတော့မည်ဖြစ်သည်။ တစ်ပါတ်သို့မဟုတ်ဒီတော့အချိန် Amy Hunt က, အ U18 အမျိုးသမီး 200 မီတာအတွက်ကမ္ဘာ့စံချိန်ကိုင်ဆောင်သူနှင့် All- ပတ်ပတ်လည် Sprint စူပါစတား, Corpus Christi သို့ matriculating လိမ့်မည်။ သူမကဒီကောရွန်ဝါဒကမ္ဘာမှာဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေတယ်၊ ​​သူမအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ BA ဘွဲ့ကိုသူတို့ပြေးနေသမျှနဲ့ဘယ်လိုဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်မလဲဆိုတာစာသင်နှစ်သစ်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ Tab ကသူမနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့်မြင့်တက်သောကြယ်ပွင့်ကြယ်ပွင့်သည်နိုင်ငံ၏အပြင်းထန်ဆုံး uni တွင်ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့ကိုစတင်နေပြီ၊ အိုလံပစ်အတွက်လေ့ကျင့်နေစဉ်သင်မေးသနည်း ကောင်းပြီ၊ ဒါကသူမစိန်ခေါ်မှုကိုနှစ်သက်လို့ပါ။ ငါဟာအပြိုင်အဆိုင်လူတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်မလုပ်သမျှအရာအားလုံးထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးချင်ပါတယ် ဖြစ်နိုင်သမျှအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုရရန်ကြိုးစားသည့်အရာတစ်ခုစီကိုကျွန်ုပ်ချဉ်းကပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်မည်မျှဝေးဝေးသွားနိုင်သည်ကိုကြည့်လိုသည်။ ဒါပေမယ့်သူကပညာရေးအောင်မြင်မှုလောက်ပဲမဟုတ်ဘူး၊ ပညာရှင်တွေလည်းသူမကိုလမ်းကြောင်းပေါ်ပိုကောင်းအောင်ကူညီပေးမယ်လို့လည်းသူမခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါဘက်မှာဒီဂရီထားတာကောင်းတယ်ထင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အားကစားသမားတွေဆီကငါ့အာရုံကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အာရုံစိုက်ဖို့လိုတယ်။ ငါအားကစားသမားအပေါ်လုံးဝအာရုံစူးစိုက်လို့မရဘူး, ငါခေါင်းကိုဆုံးရှုံးချင်ပါတယ်နှင့်ငါ့လေ့ကျင့်ရေးကိုထိခိုက်လိမ့်မယ်။ ငါအားကစားသမားတစ် ဦး ထက်ပိုပြီးဖြစ်ခြင်းဟူသောခံစားချက်ကိုကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပြေးရုံမျှသာမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၌ကျွန်ုပ်တို့၌များစွာရှိသည်။
ကင်းဘရစ်မှမေီ၏ခရီးကိုအမှန်တကယ်လျှောက်ထား၏မည်သည့်အစစ်အမှန်အတွေးများမရှိဘဲ, ဘာသာရပ် Masterclass များအတွက်မြို့သို့ခရီးစဉ်နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ငါကအားလုံးကိုဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါဟာအတွေ့အကြုံအတွက်ပဲသွားခဲ့တာပါ၊ ကားပေါ်ကနေငါပြန်လာခဲ့ရင် '[ကိန်းဘရစ်ကိုသွားရင်] တကယ်ကိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ 'မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့မထင်ဘူး' ဒါပေမယ့်ငါ့မိဘတွေကအဲဒါကိုပြန်တွန်းပို့လိုက်တယ်။ သူတို့နှင့်အတူ၎င်းမှတဆင့်စကားပြောသော, ငါကအလွယ်ကူဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေမယ်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်သဘောပေါက်လာတယ်။ သူမသည် ELAT နှင့်အင်တာဗျူးအတွက်သူမ၏ကျောင်းမှထောက်ခံမှုရရှိခဲ့သော်လည်းထိုအချိန်တွင်ပင်သူမသည်မျှော်လင့်ချက်မရှိသေးပါ။ ငါလာသည်အတိုင်းငါခြေလှမ်းတိုင်းကိုယူ။ ငါလာမယ့်အဘယျသို့အကြောင်းကိုသိပ်စဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။ ငါအင်တာဗျူးအတွက်အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ငါကနာမည်ကြီးတွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးတကယ့်ကိုကြီးကျယ်တဲ့အဆင့်တွေမှာပြိုင်ပွဲဝင်နေပေမဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့အင်တာဗျူးကကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအများဆုံးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီနောက်မှာကျွန်တော်ကဒါဟာအတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ခုလို့ထင်ပြီးလူအများစုကထိပ်တန်းပညာရှင်တွေနဲ့စကားပြောခွင့်မရခဲ့ကြဘူး။
ငါ uni cambridge သွားတာပေါ့ !!!! အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်၏ကမ်းလှမ်းချက်ကိုအတည်ပြုပြီး ၀ မ်းသာပါကအောက်တိုဘာ ober တွင်စတင်ရန်မစွမ်းနိုင်ပါ။ (2nd pic သည်ပြီးခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာလကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းဖြစ်သည်) ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ #alevels #alevelresults #alevelresultsday #examresults #cambridge #cambridgeuniversity #oxbridge #university #studying #celebration #hardwork
မျှဝေသည် မေ PDT သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်၊
ဟုတ်ပါတယ်, ဇန်နဝါရီလလာ။ သူမကကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံရရှိင်ထွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ သာမန်အားဖြင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရေးစပ်ထားခြင်း၊ ထိုအချိန်တွင်သူမသည်အခြား ၁၃ နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားများနှင့်တူသည်။ ငါ 'အမေ! ငါဝင်! 'ထိုအခါလူတိုင်းရုတ်တရက်သတိပြုမိခဲ့သည်, ငါတကယ်တော့ငါကမ်းလှမ်းမှုကိုတက်ချင်တယ်သို့မဟုတ်မချင်ရှိမရှိမှကျူးလွန်ခဲ့ကြလျှင်, ဒါဆိုရင်ကျနော်တို့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးထွက်တွက်ဆခဲ့ရသည်။
သူမ၏အားကစားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအား A-level နှင့်ဟန်ချက်ညီအောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်မလွယ်ကူလှပါ။ ကျောင်းမှ uni သို့ခြေလှမ်းတက်။ သူမအနေဖြင့်အစောပိုင်းအရာများကိုကိုင်တွယ်လိုသည်။ ယခုတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အိပ်ရေးပျက်ခြင်းအားဖြင့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့သည်။ ငါအိပ်ပျော်နေတဲ့ပိုကောင်းတဲ့အိပ်ရေးဝဝပုံမှန်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ လေ့ကျင့်ရေးဘက်မှာငါအမှိုက်လိုခံစားရတယ်၊ ငါလုပ်နိုင်မယ်လို့မထင်ဘူးလို့ပြောရင်ငါ့နည်းပြနဲ့တကယ်ခိုင်မာတဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိဖို့လိုတယ်။ အမှုအရာမသွားသောအခါပြောရန်လုံလောက်သောကြောင့်ပြproblemsနာများကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးခွဲထုတ်နိုင်သည်။ ကင်းဘရစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအားကစားသမားတစ်ယောက်အတွက်သင်လိုအပ်သည့်အခါအကူအညီလိုအပ်လျှင်အကူအညီတောင်းပါကလတ်ဆတ်သောလူများစွာသည်သူတို့၏ပန်းကန်ပြားတွင်အလွန်အမင်းရှိနေခြင်းနှင့်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှသူတို့ရုန်းကန်နေရသည်ကိုမသိရှိခြင်းတို့ကြောင့်ပျက်ပြားသွားသည်။
သူမ၏နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကိုကျောက်တုံးပေါ်တွင်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသေးသော်လည်းသူမသည်သူမ၏ဘွဲ့နှင့်ကျောင်းသားဘ ၀ ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သွားမည်ဖြစ်သော်လည်းဖြစ်နိုင်လျှင် Loughborough ရှိသူမ၏လေ့ကျင့်ရေးစခန်းသို့ပြန်သွားနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ အိမ်သို့ပြန်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အားကာယလေ့ကျင့်ခန်း၊ အာဟာရပညာရှင်နှင့်အားကစားစိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး အားကျွန်ုပ်အားအစားအစာချက်ပြုတ်သည့်အမေကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသောအရာများကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံလောက်မှုရှိရန်မလိုပါ။ ကျွန်တော့်နည်းပြနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အဆက်အသွယ်လုပ်တာကလည်းကောင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်အကွာအဝေးကနေကျွန်တော်အများကြီးလေ့ကျင့်ရပေမဲ့သူ့ကိုအဲဒီမှာနေဖို့နဲ့သူကကျွန်တော့်ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့မြင်ဖို့လိုတယ်။ ငါတစ်ခုတည်းတနင်္ဂနွေတိုင်းလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေရည်ရွယ်ချက်မှာတတ်နိုင်သမျှပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ၏လေ့ကျင့်မှုကိုသူမအားနည်းပြကနောက်ဆုံးတွင်သတ်မှတ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အားကစားကလပ်တွင်လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာများနှင့်ပေါင်းစည်းပါကကျွန်ုပ်သည်သူတို့နှင့်အတူလေ့ကျင့်မည်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည် COVID နှင့်မည်သို့သက်ဆိုင်သည်ကိုလည်းမူတည်သည်။ အားကစားကလပ်ဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော့်ကိုဆက်သွယ်ပြီးပါပြီ။
ယခုအချိန်အထိ COVID-19 သည်သူမ၏လေ့ကျင့်မှုအပေါ်အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိခဲ့သည်။ ငါ၌ငါ့မှာကျောင်းမရှိဘူး၊ ငါအားကစားရုံမှာတစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့အားကစားသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့နေခဲ့လို့ငါလုပ်ခဲ့တာထက်ပိုပြီးလေ့ကျင့်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါ့နည်းပြနဲ့ငါငါ့အစွမ်းသတ္တိနှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုစတင်ကဲ့သို့ငါတို့အချိန်ရှိသည်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးသောအရာတို့ကိုအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့အချိန်အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာကျွန်တော့်ပြိုင်ပွဲရဲ့အနိမ့်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် (အပိုလေ့ကျင့်မှုကြောင့်) အခုတော့မရှိကြပါဘူး။
Lockdown သည်သူမအတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်သို့ရောက်ခဲ့သည်။ အဲ့ဒီမတိုင်ခင်လေးမှာ Glasgow မှာပြိုင်ဆိုင်မှုကြီး ၂ ခုရှိခဲ့တယ်။ လာမယ့်နှစ်ပတ်၊ သုံးပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဟာမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုဖယ်ရှားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနားယူခွင့်ရတာဟာတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်။ ကျွန်ုပ်မိသားစုနဲ့အတူအချိန်ဖြုန်းရတာတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအရင်ကအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအလုပ်များခဲ့တယ်၊ နှေးကွေးတာကောင်းတာပဲ။ သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်အချိန်အနည်းငယ်ဖြုန်းပါ။
ဓာတ်ပုံအကြွေး: Amy Hunt
ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီက uni တစ်လျှောက်ရှိ freps များမှကြားခဲ့ရသည့်အတိုင်း ၂၀၂၀ အတန်းသည်ယခင်နှစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောလတ်ဆတ်သောအတွေ့အကြုံရှိသည်။ အချို့သောအာရုံများတွင်သာမန်ကျောင်းသား၏လူမှုရေးပေါင်းသင်းမှုအားလျှော့ချခြင်း (presam Cindies၊ 2am at Life of etc စသည်) သည် Amy အတွက်ကောင်းသောအရာဖြစ်ပါလိမ့်မည်လော။ သူမ၏အားကစားကတိကဝတ်များကသူမအားဘာမှမလုပ်နိုင်အောင်တားဆီးနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းသည် COVID ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်ခက်ခဲလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာညများပေါ်တွင်အခြေခံမထားခြင်းကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။ သူကပြောပါတယ်, ငါကလပ်ထွက်သွားကြပြီမဟုတ်ကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်၏နည်းပြနှင့်ကျွန်ုပ်သည်လတ်ဆတ်သောရက်သတ္တပတ်၌လူများကိုတွေ့ဆုံရန်နှင့်တွေ့ဆုံရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုနေ့၏အဆုံး၌ငါကျောင်းသားတစ် ဦး အားကစားသမားပေါ့နှင့်ထိုအရာနှစ်ခုတတ်နိုင်သမျှမျှမျှတတဖြစ်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၈ နှစ်ရှိပြီးကျွန်ုပ်အသက် ၁၈ နှစ်တွင်ကျွန်ုပ်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၏အထွin်အထိပ်သို့ရောက်ရန်မရည်ရွယ်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုချခြင်း၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သာနေထိုင်ခြင်း၊ တ ဦး တည်းအရာပေါ်မှာ။
ဒါကြောင့်သူမဘယ်လိုအမှန်တကယ်ပညာရေးဆိုင်ရာ bit နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားရသလဲ ကြီးကြပ်မှုကကျွန်တော့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေတယ်။ ပထမအနည်းငယ်ကအရမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်။ အများဆုံးကြောက်စရာကောင်းတာကငါစာဖတ်ခြင်းကိုမြန်မြန်စတင်ရန်လိုသည်ကိုငါသိပြီးဖြစ်သည်။ တစ်ပတ်အတွင်းကျွန်ုပ်မည်မျှဖတ်ရမည်ကိုစဉ်းစားရန်ကြောက်သည်။ သူမသည်သူမ၏သင်တန်းနှင့်လေ့လာမှု၏အနံအကြောင်းကိုအသည်းအသန်ပါပဲ။ ကျနော်တို့သင်တန်းဂျိမ်းစ် Joyce နှင့် Bronte အပေါ်စာပေတစ်ခုလုံးကိုသက်တမ်းရှိသည်ဒါပေမယ့်လည်းပြီးခဲ့သည့်နှစ် Booker ဆုဆုရှင် 'မိန်းကလေး, မိန်းမ, အခြား' ။ ထိုမတူကွဲပြားမှုကိုမြင်တွေ့ရခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလူများ၏ဘ ၀ များ၊ အချိန်များနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုလေ့လာခြင်းသည်အလွန်ကောင်းပါသည်။ ဒါကြောင့်ကျယ်ပြန့်သောကြောင့်လုပ်ဖို့အံ့သြဖွယ်ဘာသာရပ်ဖြစ်သောကြောင့်ငါငါ့ဘွဲ့တစ်လျှောက်လုံးဆီသို့ ဦး တည် gravitate သောအရာကိုကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မယ်။
သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ခိုင်မာသည့်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုထားရှိခြင်းသည်ပထမသက်တမ်းကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရန်အတွက်ကြီးမားသောအကူအညီတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူမသည်လူမှုရေးအဖွဲ့သစ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။ ငါအသစ်ကလူအများကြီးနှင့်တွေ့ဆုံရန်မျှော်လင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကအသစ်သောလူသစ်များနှင့်အတွေ့အကြုံအသစ်နှင့်အတူငါ့မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုတိုးချဲ့ဖို့က cringey အသံသော်လည်း, ကောင်းလိမ့်မည်ထင်သောကြောင့်, ကောလိပ်ကျောင်းတစ်ခုအနေဖြင့်သူမအား Corpus Christi သို့ဆွဲဆောင်ခဲ့သည့်အရာများမှာအလွန်ကောင်းမွန်သောအဆောက်အအုံများနှင့်ရင်းနှီးသောခံစားချက်ဖြစ်သည်။
ဒီအချိန် hops 5
မျှဝေသည် မေ 12:20 pm တွင် PDT မှာ 2020, သြဂုတ်လ 21, 2020 တွင် (@ a.myhunt)
သူမသည်အားကစားလောကတွင်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့သောကြောင့်သူမသည်ကင်းဘရစ်လူမှုအသိုင်းအ ၀ န်းတွင်အလွန်အမင်းမြင်နိုင်ခြင်းနှင့်သူမအနေနှင့်အများပြည်သူမျက်နှာဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ကန့်သတ်ခံရခြင်းအပေါ်မည်သို့ခံစားရသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေးမိသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့မှာလတ်ဆတ်တဲ့အဖွဲ့နဲ့စကားပြောနေတာကြောင့်လူတချို့ကငါ့အကောင့်ကိုရောက်လာပြီးသူတို့ဟာအပြာရောင် tick နဲ့နောက်လိုက်တွေရဲ့ x ပမာဏကိုတွေ့ခဲ့ရလို့ပါ။ အခြားသူများတွင်, ငါအချို့သောအမည်မသိထိန်းသိမ်းထား, ဒါကြောင့်လူတွေငါ့ကိုငါ့ကို၏အမြင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ ငါကစဉ်းစားရန်မကြိုးစား, ကင်းဘရစ်သည်ဤမျှလောက်များစွာသောလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဘဝမှာဖြစ်ပျက်နှင့်အတူဤမျှလောက်များစွာသောလူတွေကိုဆွဲဆောင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ငါမျှမျှတတပျှမ်းမျှပေါ့ခံစားရတယ်။ သူမရေဒါအောက်မှာဆက်နေရင်တောင်သူမ The Daily Mail ကိုသူမတောရိုင်းညတိုင်းထွက်ခွာသွားတိုင်းအချိန်ကုန်ခံပြီးထွက်ခွာသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေပါသလား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်စားပြုရုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကွဲပြားသောမိတ်ဖက်များ၊ ငါ၏ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကျွန်ုပ်မိသားစုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဒါဟာပညာရှိဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရုံလောက်ပဲ။ ဒါကြောင့်ဒီဟာကငါလုံးဝမိုက်မဲသောအရာတစ်ခုခုကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိခြင်းရဲ့သိစိတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာလိုင်းရှိတယ်။ သင်ဟာအခြေခံကောင်း၊ လူသားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။
ဒီမိန်းကလေး meme ၏ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်
အနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်။ မေီရဲ့အပြုသဘောအတန်ငယ်ကူးစက်ဖြစ်ပါသည်, သူမ၏စကားပြောကောလိပ်မှပြန် ဦး တည်အကြောင်းကိုငါ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ သူမသည်နည်းမျိုးစုံဖြင့်ထူးကဲသောအားကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်းသူမသည်အခြားပိုမိုလတ်ဆတ်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ အာရုံကြော၊ သူမဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်အားထက်သန်ပြီးပထမသက်တမ်းကိုဆက်လက်ရှင်သန်ရန်မျှော်လင့်ခြင်းကဲ့သို့သူမနှင့်တူသည်။
သငျသညျ GB ကိုများအတွက် Sprint running, ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ Zoom ကိုပို့ချချက်များအောင်ဖွင့်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်, ငါရှိသမျှသောလတ်ဆတ်သောဤပညာသင်နှစ်အသစ်နှင့်အတူကံကောင်းခြင်းအလိုရှိ၏။
ဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံအကြိုက်ဆုံး: Amy Hunt